10 burush Photoshop oo bilaash ah, miyaadan wali soodajin? | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Burush, Khayraadka
Nolosheena hal-abuurka ah ee aan u marino warbaahin dhijitaal ah ayaa si aad ah u xadidan haddii aysan ahayn tan caawinta burushyada na siiya. Taasi waa wax aan jeclahay hal-abuurka, waad ogtahay. Laakiin mahadsanid barnaamijyada iyo isticmaaleyaasha iyaga abuura waxaan heli karnaa ilo aan xadidneyn.
Iyo weliba mahad dheeraad ah, in badan oo ka mid ahi ay bilaash yihiin. Ama, haddii aad aragto inaad tababar qaadatay, waxaad ku heli kartaa dib-u-soo-celin dhaqaale adiga oo abuura naftaada. Wax umuuqda mid murugsan waxaa laga yaabaa inaanay sidaa u dhib badanayn, samir yar iyo u huritaan. Xitaa sidaas oo ay tahay, dadkaas aan weli u tababbarin, waxaan u keenay dhowr ka mid ah burush Photoshop lacag la'aan ah..
1 Burush qarax
2 Taxanaha Nagel
4 Wareegyo iyo goobo badan
8 Ku aaddan sabuuradda!
9 Saamaynta dhiigga
11 Haddii ay dhacdo inaad ku dhiiratid, halkan ayaa ah hage deg deg ah oo lagu abuurayo burush
Waxaa jira 16 burush oo leh saameyn qarax. Asal ahaan ma arki doontid iyaga wax keenaya natiijo qarax ah sida sawirka, laakiin «baaxad»Ama hoos loo dhigay si loogu ciyaaro halabuurkeeda iyo natiijada natiijada aan raadineyno. Tusaale ahaan, haddii aan si fudud u galno saameynta qaraxa burushka, waxay muujin doontaa cawlan qiiq fudud. Laakiin haddii aan ku darno wehliyaha lagu daray, waxaan siin doonnaa taabasho macquul ah.
Baakadan oo ka kooban toddobo burush waxay bixisaa naqshado qaas ah oo ku saabsan deegaanka. Gaar ahaan afar nooc oo kala duwan oo deegaanka dabiiciga ah ah. Taas oo soo saarta qaabab kala duwan oo fudud, hab siman iyo geeso aan caadi ahayn. Waxaa ka mid ah qalin dhuxul dhuuban oo la cadaadiyey iyo burush qalalan.
Dayaxa, wuxuu ka tirsan yahay buraashyo taxane ah oo 'sixir' ah oo ay abuureen saddex qoraa oo kala duwan. Midkani wuxuu ku saabsan yahay, sida magaca ka muuqata, dayaxa. Laakiin dhammaantood maahan qaabab wareegsan oo leh shay ka dhigaya mid u eg dayaxa, waxaa jira qaabab badan laakiin la xiriira habeenkaas oo u muuqda inay ka yimaadeen jawiga avatar. Ma haystaan ​​qashin.
Wareegyo iyo goobo badan
Brusheezy waa bog u heellan bixinta wax badan oo ka mid ah agabkeeda. In kasta oo kuwa kale yihiin kuwo qiimo leh oo waad ku iibsan kartaa qiimo jaban. Kuwani waa 20 burush oo qaabab wareegsan oo kala duwan leh iyo cabbirro kala duwan. Hadana sidaan wada ognahay hada, waan jaan qaadi karnaa cabirka iyo qaabka. Burushka noocan ah, oo ay weheliso xoogaa qaab isku dhafan, ayaa u abuuri kara saameyn asal ah sawiradaada.
Mararka qaarkood darbiyadu waxay u baahan yihiin midab yar. Ama xitaa dabeecada aan wax ka bedelno, yaa og. Kuwani waa burushyo kala firdhisan oo qaabab kala duwan leh.
Kuwani waa kow iyo toban burush ah oo Photoshop ah oo cabirkoodu yahay 2500 px sidoo kale waxay diiradda saareen asalka daabacaadda si ay u siiso qaab wasakh ah naqshadahaaga.
Ilaa 21 waa burushyada kaladuwan ee aad ku rakibidoonto fudud .ABR sawirkaaga Iyaga ayaa loo isticmaali karaa shaqsi ahaan ama midba midka kale ayaa la is dul saari karaa. Sida tusaalaha: Photoshop aasaasi ah: Sida loo tirtiro qayb ka mid ah sawirka. Taas oo sawirka ugu horreeya ku soo baxayo lakab qiiq ah oo bullaacad ah. Waxaa loo adeegsaday burushyadan iyo qaab isku dhafan.
Ku aaddan sabuuradda!
Xaqiiqdii haddii aad macallin tahay ama shaqadaadu ay xiriir la leedahay waxbarashadda iyo xitaa dib u soo celinta, waxaad mararka qaarkood u baahan tahay inaad heshid burushka ka dhigaya mid u eg inaad sabuurad ku qortay. Burushkan ayaa kaa caawin doona inaad tan sameyso. Xitaa haddii aad iyaga kala shaqeysid qoraalka, waxaad abuuri kartaa font kuu gaar ah, taas oo aan waligood xanuunayn. Waxaa ku jira 12 burush oo kala duwan.
Samee Tarantino Faan idinka mid ah oo leh saameyntan dhiigga. Waxay yihiin kuwo indhaha soo jiita oo macquul ah. Waad u habeyn kartaa iyaga kaliya ma aha inay noqdaan dhiig, laakiin sidoo kale sida rinjiga acrylic ama rinjiga hoostiisa iftiinka UV.
Saamayn dhiig oo dhalaalaysa
Dhamaan burushyada aan la taaban karin ayaa siin kara asalka sawirka haddii aad si wanaagsan u dhaqan geliso. Laakiin iyagu kaliya faa'iido uma lihi tan, wax ka beddelashada burush kasta waxaad ku guuleysan kartaa saameynta aad ugu baahan tahay sawirkaaga. Xitaa haddii aad u isticmaasho sawir aroos, waxay faa'iido u yeelan kartaa laydhkiisa. Isku day waadna la yaabi doontaa.
Burushyada la soo gooyey
Haddii ay dhacdo inaad ku dhiiratid, halkan ayaa ah hage deg deg ah oo lagu abuurayo burush
Si aad uga sameysatid burush aaladda Photoshop sawir ama sawir leh cabir xadkoodu yahay 2500 x 2500 pixels, ku sawir qaab dukumiinti maran ama lakab gooni ah qalab kasta oo aad go aansato. Ama qaabab iyo weel rinji ama burush, tusaale ahaan.
Kadib, xulo qaabka ama qayb ka mid ah sawirka aad xiiseyneyso inaad ku tilmaamto aaladda xulashada, sida magaca ka muuqata. Iyo si loo dhammeeyo, waa inaan tagnaa menu-ka Tafatirka; Qeex qiimaha burushka. Sanduuqa xiga ee aan ku tusi doono, dooro magaca la doonayo si aad u badbaadiso burushkaaga. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa haddii aad rabto inaad iibiso shaqadaada mustaqbalka. Xusuusnow taas awgeed waa inay noqotaa mid gaar ah oo adigu adigu sameysay. Si looga fogaado dhibaatooyinka xuquuqda lahaanshaha.
Haddii aadan wali ka helin buraash Photoshop si aad u qabato qaar ka mid ah shaqadaada, waad ku sii fiirin kartaa halkaan Hal-abuurka qoraallada kale ee badan ee la sameeyay ama sidoo kale waxaad ka raadin kartaa bogagga lagu soo qoray qoraalkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Burush Photoshop Bilaash ah
Hababka isku dhafan: sida loo barto sida saxda ah ee loogu isticmaalo